२२औं संस्करणको विश्वकप पहिलो पटक चिसो मौसममा ! – Everest Dainik – News from Nepal
२२औं संस्करणको विश्वकप पहिलो पटक चिसो मौसममा !
काठमाडौं, असार ३० । २२औं सस्करणको फिफा विश्वकप कतारमा हुँदैछ । यो संस्करणको विश्वकप नोभेम्बर २१ देखि डिसेम्बर १८ सम्म हुने छ । अहिलेसम्म गर्मी मौसममा हुँदै आएको विश्वकप २०२२ मा भने पहिलो पटक चिसो मौसममा हुने भएको हाे । फिफा अध्यक्ष जियान्नी इन्फान्टिनोले घोषणा गरेको कतार विश्वकपको मितिले इतिहास नै रचेको छ ।
अल रायन रंगशाला
२१औं संस्करणसम्म आइपुग्दा सबै संस्करण जुन-जुलाईमा हुँदै आएका छन् । नोभेम्बर र डिसेम्बरमा विश्वकप हुने भएपछि क्लबहरुले आफ्नो फुटबल क्यालेन्डर पनि परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । फुटबलका अधिकांश घरेलु लिगहरु अगस्ट देखि अप्रिलसम्म हुने गरेका छन् । तर सन् २०२२ मा लिगको मितिमा परिमार्जन गर्नु पर्नेछ ।
अल वाक्राह रंगशाला
‘आउँदो विश्वकप कतारमा नोभेम्बर २१ देखि डिसेम्बर १८, २०२२ मा खेलाइनेछ’, मस्कोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जियान्नी इन्फान्टिनोले भने, ‘सबै लिगहरुलाई सूचना दिइसकिएको छ र उनीहरुले त्यसै अनुसार आफ्नो क्यालेन्डर परिमार्जन गर्नेछन् ।’ ३२ टिम समावेश गरेर खेलाइने यो अन्तिम विश्वकप हुनेछ । सन् २०२६ मा उत्तर अमेरिकामा हुने विश्वकपमा ४८ टिमको सहभागिता रहनेछ ।
खालिफा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, दाेहा
ट्याग्स: Fifa world cup 2022, Katar Fifa world cup 2022
डेढ करोड बढी मूल्य पर्ने ६३४ थान मोबाइलसहित २ जना पक्राउ
धनगढीको जुगेडामा फुटबल प्रतियोगिता हुने